Madaxweynaha Kenya Oo La Sheegay In Uu Hargeysa Imanayo | Gabiley News Online
Xiisada Siyaasadeed ee u dhaxaysa Labada Wadan ee Kenya iyo Soomaaliya ayaa mar kale cirka isku shareertay ka dib markii shalay go’aan ka soo baxay Dawladda Kenya wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dawladda federaalka soomaaliya laga hor joogsaday in ay gudaha u soo galeen magaaladda Nairobi, ka dib markii ay ka soo degeen garoonka Jomo Kenyatta.
Masuuliyiintan ayay laamaha amaanku amar ku siiyeen in ay u hooydaan garoonka, marka uu waagu baryana dib ugu laabtaan Magaalada Muqdisho oo ay marka horeba ka soo kicitimeen, kuwaas oo saakaba dib ugu laabtay.
Sidoo kale ciidamada Amaanka ee magaaladda Nairobi ayaa albaabada u laabay ilaa shan xawaaladood oo ay soomaalidu ku leedahay Magaaladdaasi
Soomaaliya ayaan iyaduna wax war ah ka soo saarin arrimahan ka soo cusboonaaday dalka kenya, halka aanay talaabadan faahfaahin ka bixinin dawladda Kenya ujeedada ay ka leedahay.
Soomaaliland oo iyadu ka go’day Soomaaliya inteedii kale, saddex maalmood ka horna u dabaal degaysay 28 sano guurada ka soo wareegtay markii ay soomaaliya dib ugala soo noqotay xornimadeeda ayaa khilaafkan cusub ee soo kala dhex galay soomaaliya iyo kenya ay uga soo baxday fursadi.
Wararka laga helayo Magaaladda Nairobi ayaa sheegaya in Dawladda Kenya ay qaban qaabinayso sidii ay u sii laban laabi lahayd xidhiidhka ay la yeelanayso Soomaaliland, waxaana Rashid cabdi oo ah Madaxii hore ee Hay’adda Xasaradaha aduunka “Criss Group” qoraal kooban oo uu soo dhigay bogga uu ku leeyahay Twitterka uu ku sheegay in Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu safar ku tagi doono Magaaladda Nairobi.
Sidoo kale waxa uu isla qoraalkaasi ku sheegay in sanadkan 2019 Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta uu isna safar ku iman doono Magaaladda Hargeysa.
Haddii ay arrimahaasi dhab noqdaan waxa ay halkaasi fursad dahabi ahi uga banaan tahay Soomaaliland, waxaana lawada dhawrayaa ama sugayaa kolba sida ay soomaaliland uga faa’iidaysan doonto fursadahan.